पार्वती राई बनिन् ‘न्यूयोर्कवाली बसन्ती’! हेर्नुहोस् भिडियो ! - MusicKhabar.com: Nepal's No. 1 Musical Newspaper
पार्वती राई बनिन् ‘न्यूयोर्कवाली बसन्ती’! हेर्नुहोस् भिडियो !
प्रकाशित: १३ पुष २०७४, बिहीबार
१३ पुष, काठमाडौं । नयाँ बर्ष सन् २०१८ को शुभकामना सहित क्यानाडावाट नयाँ अत्याधुनिक नेपाली गीतको भिडियो रिलिज भएको छ। अन्तरराष्ट्रिय नेपाली कलाकार ईश्वर थापाको निर्माण तथा निर्देशन र सम्पादनमा जाडोमा आगो बाल्ने न्यूयोर्कवाली बसन्ती बोलको डान्सिङ गीतको रिलिज भएको हो।
ड्रिम्सगेट नेपाल युट्युब च्यानलवाट रिलिज भएको उक्त गीतको भिडियोमा गायन गायक जगदीश समाल र गायिका सपनाश्रीको रहेको छ। संगीत ओम कर्माचार्यको रहेको छ भने, गीतकार सुरेन्द्र नकर्मी हुन्।
भिडियोमा गीतको वोलजस्तै रोमान्टिक र फास्ट टाइपको डान्सिङ रहेको छ। नयां पुस्ताको रोजाई अनुसार ईश्वर थापाले भिडियो निर्माण गरेका छन्। जुन नयाँ पुस्ताको नयाँ ट्रेण्ड अनुरुपका डान्सिङ टाइपको भएकोले भिडियो सवैको प्रिय बन्ने निश्चित छ।
प्रस्तुत छ–यिनै आगो बाल्ने न्यूयोर्कवाली बसन्तीको भिडियो: